Simannaa WBO: 'Koreen araaraa, waraana na jalatti diigaa jira' - BBC News Afaan Oromoo
Koreen araaraa Abbootii Gadaa Waraana Bilisummaa Oromoo simachuuf gara lixaatti bobba'e waraana diigaa jira jechuun ajajaan WBO Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa (Marroo) BBC'tti hime.
Koreen araaraa kun ana dubbisuuf fedhii hin qabu jedha Marroon.
"Bilbila karaa adda addaa argataniin dhunfaa dhunfaan dubbisanii waraana diiguu irratti xiyyeeffatani" jechuun komata.
Waraanni Bilisummaa Oromoo simatamuu 'eegale'
Barreessaan koree araaraa obbo Jawaar Mohaammad garuu ajajoota waraanaa argachuuf koreen carraaqqii guddaa taasise, koreen araraa nu dubbisuuf fedhii hin qabu kan jedhu dhugaa miti jechuun BBC'tti himeera.
Abbootiin Gadaa Lixa jiran ajajaa Zoonii Dhihaa dubbisuuf yaalaa akka turanis fuula 'Facebook' isaa irratti barreessee ture.
Akka Marroon jedhutti garuu kun dhugaa miti.
"Miidiyaa irratti na argachuuf yaalanii akka hin milkoofne dubbatu, qabatamaan garuu ana arguu dhiisanii waraana ana jala jiru tokko tokkoon diigaa jiru" jedha.
"Kallattii adda addaan isaan arguuf yaalee itti hin mikoofne" jechuunis dubbata.
''Hogganoota ABO qabanneeti kan deemne. Ajajaa waraanaa naannoo san jiru qunnamuudhaaf ijibbaata guddaa godhani. Haalli sun mijatuu hin dandeenye. Nu arguu hin barbaanne kan jedhu kuni soba,'' Jawaar immoo.
Maaliif koree arguu feete?
Xalayaan Hayyu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa ajajoota zoonii adda addaarra jiraniif barreessan, 'meeshaa/hidhannoo keessan Abbootii Gadaafi jaarrolii biyyaaf kennitanii gara isaan jedhanitti akka sossootan' jedha.
Waamichi hayyu duree kun osoo jiru maaliif koree araaraa waliin mari'achuu barbaadde jennee gaafanneerra.
"Jaarroleen keenya waa'ee waraana kanaa biyya keessa taa'anii ija jabaatanii dubbachuu dadhabaniiru waan ta'eef, uummatni qabeenyaa isaa kana akka tikfatu jedhani" jedha Marroon.
Xalayaan hayyu dureen ABO nuuf barreessan Abbootii Gadaa simannee akka waliin mari'annu jedhuyyuu isaan nu arguus ta'e nu dubbisuu hin feene jedha.
"Harka nun micciiriinaa, yeroo nuu kennaa nu mariisisaa kanatu furmaata waaraa fida jenneenii sana gochuu hin dandeenye."
Yeroodhuma jedhame keessattillee ni fixanna nu dubbisaa jennaanis fedha dhabani jedha.
Walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa Oromoo Bayyanaa Sambatuu ajajaan dhihaa waamicha hayyu dureen dabarsan simatanii dhufu jennee eegaa jirra jechuun guyyaa lama dura BBC'tti dubbatanii turan.
''Ergaa hogganaan isaanii kennan hojiirra oolchan malee Jaal Marroo ani hin agarre,'' jechuun Ajajaa Waraana WBO Lixaa akka hin arganne himaniiru.
Jawaar gama isaatiin ''Waraanni ummanni Oromoo naa gali jedhun dhaabni isaa naa gali jedhun galuu dhabun nama gaddisiisa,'' jedha. Dabalataanis, koreen kuni guddaa akka carraaqeefi ''wanti nu harkatti hafe hinjiru,'' jedheera.
Waa'ee waraana warra galanii...
Waraanni dhibbeentaa 95 ammallee qawwee hidhatee bosona keessa jira jedha Marroon.
"Dhibbeentaa 95 mitii, namni tokko maqaa Oromoon qawwee qabatee bosona keessatti hafee jennaan, rakkoon Oromoo furmaata hin arganne. Wanti itti aanu qabsoo hadhooftuudha, yoon kophaa kiyyan dhaabadha ta'eyyuu," jedha.
Miseensonni waraanaa guyyoota darban simataman doorsifni adda addaa Marroo irraa nu dhaqqabaa jira jechuus haaleera.
"Gaaf isaan galan bar nuti qawwee baanneetuma bosona teenya, itti dhukaasuu dandeenya ture garuu deebinee walitti dhukaasuu hin qabnu jennee dhiifne, namni nama doorsisu tokko hin jiru" jedha.
Waraana bilbilaan akkan hin dubbisne bilbila najalaa cufanii, waraana irraa gargar na kutaniiru jechuunis komata. Kun qaama shira qabsoo Oromoo irratti raawwatamaa tureeti jedha.
Haal dureen gama waraana zoonii dhihaan bahe akka guutamus gaafateera.
Guyyoota sadan darban miseensonni Waraana Bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaatti simatamaa turan.
Lakkoofsi loltoota simatamanii hin beekamne. Akka karoora koree araaraatti guyyaan simannaa har'a [Kamisa] xumurama ture.
Haa ta'u malee waraana bosonatti hafe guutummaatti simachuuf guyyaan ijibbaataa shan dabalamuu Obbo Jawaar BBC'tti himaniiru.
Koree Araaraa: Waraanni Bilisummaa Oromoo simatamuu eegale
Tibbana naannoo Affaar keessatti maaltu mudate?
Dr Dabretsiyoon G/mikaa'eliif Geetaachoo Raddaa dabalatee hoggantoota TPLF irratti himanni baname
23 Adooleessa 2021
Eeyyamni hojii 'Addis Standard' dhorkamee ture kaafame
Garee atileetiksii Itoophiyaa Tookiyootti qabxii 'gaarii' galmeessuuf kaayyeeffate
Itoophiyaan hidhaa Haaromsaa waggaa lammaffaa bishaan guutuu 'milkaa'inaan xumure' jette
Dargaggoo tekuwaandoon abjuu ofiifi biyyaa dhugeeffate - Solomoon Tufaa
Miidiyaarraa fagaatanii kan turan Jenaraal Birhaanuu Juulaa 'ajaja eegaa jirra' jedhan
Namtichi haadha warraasaa fakkaachuun xiyyaaraan balali'e walakkaatti to'atame
Dhaabbati uffanni isaa Covid ittisa jedhe pawoondii miiliyoona 2.6 adabame
Harmee daa’imashee balaa sigiga lafaa irraa olchitee ofii duute
Keeniyaan diroonii fayyadamuun jiisaa busaa ajjeesuu eegalte